Ka hortaga Tahriibka oo B/weyne loogu hadlay: Sawirro - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa magaalada Baladweyne lagu qabtay kulan looga hadlayay ka hortaga dhalinyarada u tahriibta dalalka shisheeye, iyadoo kulankan ay kasoo qeybgaleen 160 dhalinyaro ah.
Kulankani ayaa waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen Wasaarada Dhalinyarada iyo Isboortiga dowlada federaalka iyo hay’adda IOM. Waxaa ka qaybgalay kulankan maamulka degmada beledweyne odayaasha dhaqanka iyo culumaa’udiinka waxaana muhiimada ugu weyn ay ahayd sidii dhalinyarada Soomaaliyeed looga wacyi gelin lahaa qatarta uu leeyahay tahriibka.tahriib-shir-1Duqa degmada Beledweyne Cumar Adan Deeqow oo ka hadlay ayaa waxaa uu sheegay in aysan wanaagsanayn in qofka naftiisa halis geliyo waxana uu ugu baaqay dhalinyarada in ay ku dadaalaan waxbarashadooda kana fogaadaan tahriibka.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo culumaa’udiinka oo ka hadlay kulankan ayaa waxa ay sheegeen in tahriibka uu yahay mid dhibaato gelinaya dhalinyarada noloshooda ayna wanaagsan tahay in dhalinyarada oo ah qeyb muhiim u ah dalka ka qeyb qaataan horumarinta dalkooda maadaama haatan ay dowlad rasmi ah ka jirto dalka Soomaaliya.tahriib-shir-3Sidoo kale kulankan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qeybgashay iyagoo sheegay in tahriibku uu yahay mid mugdi gelinaya mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed. Kulankaan kadib ayaa koob loogu magacdaray kahortagida tahriibka waxaa loo dhigay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne iyadoo koobkaana ay ku guuleysatay mid ka mid ah kooxihii tartanka ka qeybgalay.tahriib-shir-2Kumanaan ruux oo u badan dhalinyaro ayaa sanad walba waxa ay ku dhinteen badaha caalamka iyagoo doonaya in ay galaan wadamada ku yaal qaarada Yurub. Dadkaasi ayaa waxaa ka mid ah dhalinyaro badan oo Soomaali ah kuwaasoo sanad walba ku nafwaaya tahriibka.
2 jir hooyadiis ku dilay bastoolad dalka Mareykanka: Video